Loharanom-baovao avy amina tsara sitrapo no nahafantarana fa misy «couche culotte» efa lany daty amidy amin’ny vidiny mora eny Ambodin’Isotry. Nanao fanadihadiana avy hatrany ny teo anivon’ny polisy ekonomika Anosy ka nogiazana ireo entana ireo. Nandritra ny famotorana ireo tompon’entana no nahafantarana fa eny Behoririka no fakany ireo entana ka 8.000 ariary hatramin’ny 10.000 ariary no vidin’ny 1 fonosana lehibe. Ny alakamisy 5 septambra dia nidina teny amin’ilay tranombarotra teny Behoririka ny polisy ka nandritra ny fisavana dia « couche culotte » lany daty miisa 230 fonosana lehibe no tra-tehaka. Nosamborina avy hatrany ny teratany sinoa. Taorian’ny fandalovany teo anivon’ny fampanoavana dia naiditra am-ponja vonjimaika izy.